DAAWO: Dagaalkii Ceerigaabo oo xoogeystay, Gaadiid la kala qabsaday & Saldhig ciidan oo laga qabsaday Muuse Biixi. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: Dagaalkii Ceerigaabo oo xoogeystay, Gaadiid la kala qabsaday & Saldhig ciidan oo laga qabsaday Muuse Biixi.
DAAWO: Dagaalkii Ceerigaabo oo xoogeystay, Gaadiid la kala qabsaday & Saldhig ciidan oo laga qabsaday Muuse Biixi.
July 27, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka maanta 5
Wararka naga soo gaaraya magaalada Ceerigaabo ayaa sheegaya in uu dagaal qaraar kasocdo deegaanka lagu magacaabo Tabca oo ah ALbaabka kaliya ama wadada qura ee laga galo buuraleyda gobalka Sanaag, waxaana dagaalamaya ciidamada Somaliland iyo kuwa uu hogaaminayo Col, Caare oo horey uga goostay.
Sidaas oo kale dhimasho iyo dhaawac Askar katirsan ciidamada Somaliland ayaa la geeyey magaalada Ceerigaabo, sidda uu ku waramayo wariye madax banaan oo kusugan magaaladaas.
DEG DEG LIVE Baabur Laga Gubey Somaliland Sanaag Dagaal Qasaare
Iiraan oo sii daysay qaar kamid ah shaqaalihii saarnaa markabkii ay ka qabsatay UK.
Hala soo qabto sarkhaanka ninka doonaya inuu nabada carqaladeyo
Allah(SWT) ha kala qaboojiyo. Amin… Allah hada waxa taagan hadmaan ka afeeftay !!!.
Arrinta nabad baa lagu dhameynayaa. Madaxweynaha iyo Xisbiyaduba wey ka hadleen. Wixii saaka dhacay waa la xadiday. Insha Allaah qaswadayaasha suryo ay ka dusaan lasiin maayo. Qaswadayaasha Dibadaha kasoo qeylinaya ee doonaya in dagaal dhaco guuleysane maayaan. Dal Madaxdiisii iyo Shacabkiisii nabada dhowranayaana qaswadeyaal tiro yari waxba ka qaadi Kari maayaan.
Ha u bixin wararkan la buunbuuninayo Xaajin Saalaxow. Arintu wey degentahay. Waana la xalinayaa. Insha Allaah.
Sxb ducada ku koob dulucda hadalkaaga. Maanta uma baahnin ineynu faraha isku fiiqfiiqno. Xalka hadaad kanshaqeyn kareyso ka shaqee. Hadii kale ducada uun badi.
Wallahi farxad uma qoslin lkn nabsigu waa mid aan marna baaqan oo ama soo dhutiyah ama soo deg dega aarinkaas meel iiga qor!
Hadaba waxaan ula jeedaa S land waxay Puntland kuheeysay dhibaato aan yareen iyo weliba Somalia oo dhan, sida buuraha Galgala ineey lug weeyn kulahaayeen ilaa iyo hadana ka dagaalaman hadaba manta ayagii baa reerkoodii weliba Isaaq tatirsan BUURIHII ugaleen oo halkaas dlagala dagaalamayaa oo weliba Burco iyo Sanaagna eeysan gacan weeyn uGu jirin! Weliba reer Puntland mana cabaadaan ee ciidankooda geesiyada ah ayaa Daacish iyo Al sheeydaan oo reer koonfur eey awood uwaayeen hal gelin ku kala tuuraan Masha Allah. Hadaba Miyaanay taas aheen GOD WALAAL HAQODIN HADAAD QODANA HADHEEREEN KU DHICI DOONTAA MA OGIDE!